Magaalooyin Swiss ah oo ka codsaday dawlada inay siiyo dal kugalka shaqaalaha shisheeyaha - Horn Future
Zürich (Horn Future)-Magaalooyinka Basel, Geneva iyo Zurich ee dalka Switzerland ayaa ku dhawaaqay baahida loo qabo shaqaale shisheeya ah oo dheeraad ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Germany.
Magaalooyinkaas ayaa waxay ugu baaqeen xukuumadda Swiss maanta oo Salaasa ah inay bixiso dalku-gal(visa) dheeraad ah oo la siinayo xooga shaqaale ee ka imanaya dalalka loogu yeedho dunida saddexaad ee ka baxsan Midowga Yurub.
Waxaa xusid mudan in xukuumadda Swiss ay sanadkan soo saartey kaliya 7,500 oo dalku-galyo ah (visa) ah oo nuucaas ah,laakiin saddexdan gobol ayaa waxa goor hore ka dhamaaday qaybtii loo qoondeeyay ee guga sanadkan.
Xukuumaddu ayaa waxay hoos u dhigtay tirada dalku-galyadan wixii ka dambeeyay aftidii bulshada ee ka dhanka ahayd imaanshiyaha soo-galootiga badan.
Saddexdan magaallo ee Swiss kuyaala ayaa waxay ka welwelsan yihiin awoodooda tartameed,sida ay ku dhawaaqeen waaxaha dhaqaalahooga oo ay ku sheegeen waraaqo wadajirka ah oo ay u gudbiyeen xukuumadda.
Warbixintan ay soo saareen ayaa waxa lagu sheegay in shirkadaha, kulliyadaha iyo machadyada cilmi-baadhistu aynan awoodin inay abuuraan karti heer sare ah oo ka jirta Switzerland ama Midowga Yurub,waxana lagu xusay agaasinadan inay jirto yaraansho waaxaha ay kamid yihiin technology ga ,isgaadhsiinta, maaliyaddaha iyo dawada.
Waxa xusid mudan in shirkadaha iyo machadyada Switzerland ee raba in ay hawlgaliyaan shaqaale shisheeye looga baahan yahay inay keenaan caddeyn ah in aynan ka helin shakhsiyaad ku habboon shaqooyinkaas gudaha dalka ama Midowga Yurub.
« Merkel oo mar kale ku baaqday in la sii daayo dadka u dhashay Germany ee ku xidhan Turkey	» Roobab xoog leh oo ka da’ay Yemen iyo daadad waawayn oo sababay dhimashada 14 qof